Jaona 6: 59-65 "59 Izany teny izany no nolazainy tao amin’ny synagoga, raha nampianatra tao Kapernaomy Izy. 60 Koa maro tamin’ny mpianany, nony nandre, dia nanao hoe: Sarotra izany teny izany, iza no mahahaino izany? 61 Ary fantatr’i Jesosy tao am-pony fa nimonomonona tamin’izany ny mpianany, ka dia hoy Izy taminy: Mahatafintohina anareo va izay? 62 Mainka raha mahita ny Zanak’olona miakatra ho any amin’izay nitoerany taloha hianareo. 63 Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. 64 Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr’i Jesosy hatramin’ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika Azy. 65 Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen’ny Ray azy izany."
Mora azo ve ny Teny nolazain’i Jesosy? Sarotra hoy ny mpianatra sasany sady nimonomonona tao am-pony izy ireo. Noheverin’ny olona angamba hoe hohanina tahaka ny mihinan-kena ny fihinanana an’i Jesosy. Fantary ny Tompo anie fa misy amin’izy ireo tsy mino sy hamadika Azy e! Nampahafantarin’i Jesosy hatrany anefa ny lalana satria tsy tiany ho very ireo. Ny olona tsy manaiky hiasan’ny Fanahin’Andriamanitra dia tsy hanaiky sy hino an’i Jesosy. Andriamanitra no manokatra ny fontsika, mampahafantatra antsika momba ny zanany. Tsy mahay tia sy mankato ny Teny isika amin’ny hery sy fahaizana na fahalalana ananantsika. Mila ny Fanahin’Andriamanitra isika hanampy, hitarika, hanazava. Tandremo sao isan’izay tsy mino an…